इन्स्टाग्राम फन्ट्स: सर्जक, प्रतिक, इमोजी, अनलाइन कपी र पेस्ट
इन्स्टाग्राम लागि फन्टहरू
हाम्रो वेब साइट मा तपाईं नयाँ फन्टहरू धेरै इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। त्यहाँ इन्स्टाग्राम लागि फन्टहरू को एक विस्तृत चयन छ। मानक फन्ट बाट अलग, तपाईं आफ्नो रुचि गर्न इन्स्टाग्राम लागि कुनै पनि सुन्दर फन्ट उत्पन्न गर्न सक्छन्। कुनै पनि लेखोटहरू र यहाँ सिर्जना पदहरू यसलाई आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम वा स्थिति, प्रोफाइल शीर्षक वा कथा, पोस्ट वा टिप्पणी छ कुनै कुरा भने, प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ र सम्मिलित तपाईँको इन्स्टाग्राम प्रोफाइल को कुनै पनि लाइन मा। रेखांकित, बोल्ड, ढल्किएको वा स्ट्राइकथ्रु: बाहेक, विभिन्न फन्टहरू वेब साइट मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अनलाइन पाठ सर्जक
एउटा सुन्दर फन्ट कसरी सिर्जना गर्ने
तपाईँको इन्स्टाग्राम प्रोफाइल मा वेब साइट मा प्रतिनिधित्व कुनै पनि फन्ट प्रयोग गर्न, तपाईँले विशेष साइट सञ्झ्यालमा आवश्यक पाठ टाइप गर्न र तपाईंलाई मनपरेको कुनै पनि फन्ट चयन हुनेछ। त्यसपछि तपाईं साइटबाट सुन्दर अक्षरहरू पाठ प्रकार प्रतिलिपि गर्न सक्षम हुनेछ। कारण यो योजना गर्न तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम नयाँ फन्टहरू थप्न र विशिष्ट आफ्नो प्रोफाइल डिजाइन सक्षम हुनेछ। हाम्रो वेब साइट प्रयोग गरेर तपाईँले प्रोफाइल शीर्षक र आफ्नो पोस्ट वा टिप्पणीमा दुवै इन्स्टाग्राम मा फन्टहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
आधुनिक संसारमा तपाईं इन्स्टाग्राम मा ब्लगिंग गर्दा आफ्नो पोस्ट साँच्चै अद्वितीय बनाउन क्रममा विशेष प्रतीक आवश्यक हुनेछ। पाठ विभिन्न प्रकारका अलग्गै, तपाईं इन्स्टाग्राम लागि प्रतीक फिटिङ को एक महान दायरा पाउनुहुनेछ। उदाहरणका लागि, यहाँ बाट तपाईं इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता नाम लागि निशान प्रतीक प्रतिलिपि गर्न सक्षम हुनेछ। तपाईं हाम्रो वेब साइट आफ्नो प्रोफाइलमा थप्न चाहनुहुन्छ भनेर तपाईं इन्स्टाग्राम लागि कुनै पनि प्रतीक प्रतिलिपि गर्न सक्षम हुनेछ।
एक इन्स्टाग्राम पोस्ट लेखन गर्दा नाम वा प्रोफाइल शीर्षक भर्नु तपाईं इन्स्टाग्राम मा ब्लगिंग गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ कति प्रतीक जान्नुपर्छ आफ्नो सामग्री योजना गर्न। त्यसैले, एक इन्स्टाग्राम पोस्ट कति प्रतीक छ?
इन्स्टाग्राम पदहरू भन्दा फोटो लागि थप एक सामाजिक सञ्जाल छ; तसर्थ, पोस्ट मात्रा सीमित छ। सीमा प्रति पोस्ट 2,200 प्रतीक हो। र प्रोफाइल शीर्षक कति प्रतीक समावेश गर्दैन? तपाईं प्रोफाइल शीर्षक आफ्नो जानकारी थप्न क्रममा 150 प्रतीक मा आवश्यक जानकारी फिट हुनेछ। इन्स्टाग्राम मा टिप्पणी साथै प्रतीक सीमा: तपाईं एक टिप्पणी दुई छोटो भन्दा प्रतीक र 1,000 अब भन्दा प्रतीक लेख्न सक्ने छैनन्।
तपाईं पनि हाम्रो वेब साइट मा इन्स्टाग्राम लागि विभिन्न इमोजीहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं इन्स्टाग्राम पोस्टहरू र कथाहरू दुवै हाम्रो वेब साइट मा सिर्जना इमोजीहरू थप्न सक्नुहुन्छ।
साइट पनि इन्स्टाग्राम लागि असामान्य ईमोटिकनहरू बनाउन एक समारोह छ। तपाईं प्रोफाइल विवरण को लागि एक ठूलो इमोटिकन संयोजन पाउन सक्नुहुन्छ। भावप्रतिमा वेब साइट बाट थपियो र इन्स्टाग्राम मा टाँसियो गर्नुपर्छ: पोस्ट वा कथाहरू ईमोटिकनहरू थप्दा को ढाँचा पदहरू र इमोजीहरू लागि प्रयोग गरिएको मिल्दोजुल्दो छ।
वेब साइट को परिचालन अवधारणा फरक युनिकोड प्रतीक प्रयोग विभिन्न शैलीहरू सिर्जना आधारित छ। त्यसैले प्राविधिक हाम्रो वेब साइट फन्टहरू सिर्जना गर्दैन, तर युनिकोड इन्स्टाग्राम उपयुक्त glyphs जोडती। युनिकोड इन्स्टाग्राम के हो?
सबै कम्प्यूटरीकृत जानकारी बाइनरी ढाँचा (zeros र व्यक्तिहरूलाई विभिन्न संयोजन) मा भण्डारण गरिएको छ। तपाईं हाल पढाइ zeros र व्यक्तिहरूलाई रूपमा सर्भर मा भण्डारण गरिएको छ छन् पनि पाठ। कम्प्युटर युग को सुरुमा प्रत्येक निर्माता बाइनरी कोड सन्दर्भमा आफ्नै राय विभिन्न पाठ प्रतीक प्रतिबिम्बित गर्न प्रयोग भएको थियो।
1980 को दशक मा बाइनरी कोड युनिकोड कारण मानकीकृत थियो। युनिकोड पाठ प्रतीक को विश्वव्यापी विशिष्टीकरण काम एक अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण अधिकार छ।
युनिकोड देखा अघि, हरेक प्रोग्रामर भण्डारण र पाठ प्रतिपादन आफ्नै तरिकाहरू प्रयोग; त्यसैले, विभिन्न प्रोग्रामर द्वारा सिर्जना दुई कार्यक्रम सहयोग थियो जब हरेक समय, को «अनुवादक» सिर्जना भएको थियो।
कारण सामान्य मानक गर्न संक्रमण एकदम जटिल र सबै निगमों पाठ प्रतीक कोडिङ को एकीकृत प्रणाली ट्रान्जिट चाहन्थे थियो भन्ने तथ्यलाई गर्न, युनिकोड पुराना सहित, प्रणाली समर्थन गर्न विभिन्न प्रतीक को सेट लागू गर्न भएको थियो। चाँडै प्रतीक को संख्या घाताङ्कीय दरमा वृद्धि, र वर्तमान यसलाई हजारौं छ। को ईमोटिकनहरू साथै पाठ प्रतीक हो; त्यसैले, युनिकोड हरेक दिन देखा सबै ईमोटिकनहरू साथै पास।
पहिलो 128 युनिकोड प्रतीक ल्याटिन वर्णमाला छन् जो ASCII प्रतीक हो। तर युनिकोड धेरै 128 प्रतीक भन्दा समावेश गर्दछ र तिनीहरूलाई थुप्रै ल्याटिन वर्णहरू सदृश, तर पत्र साहस वा ढाँचाको सन्दर्भमा मतभेद छ। यी प्रतीक सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ «pseudoalphabets» साधारण ASCII पाठ resembling तर केही मतभेद भइरहेको: Italic लेखिएको उल्टो वा रेखांकित थप बोल्ड भएर,!
यस «फन्ट» अवधि वास्तवमा विभिन्न वा केही युनिकोड glyphs अनुरूप ग्राफिक्स को सेट हो। तपाईं जो फन्टहरू छन् हास्य सान्स र एरियल, सुनेका हुनुपर्छ। हाम्रो वेब साइट द्वारा उत्पन्न पदहरू सिर्जना गर्दा कुराहरू, इमोजीहरू वा वेब साइट प्रयोग गर्दा तपाईँले कपी र पेस्ट गर्ने, ईमोटिकनहरू, साथै सूचना, वास्तवमा प्रत्येक फन्ट मा वर्तमान प्रतीक हो। तसर्थ, ढल्किएको र तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम प्रोफाइल मा यसको प्रयोग सिर्जना गर्न अन्य विस्तृत अक्षरहरू पाठ वास्तवमा अलग प्रतीक, जस्तै अक्षरहरू एक र बी, उदाहरणका लागि हो।
त्यसैले, हाम्रो वेब साइट मा यी विशेष फन्टहरू किन आवश्यक छ? साधारण फन्टहरू यहाँ प्रतिनिधित्व थियो भने, तपाईंले प्रतिलिपि तिनीहरूलाई टाँस्न सक्षम छैन! उदाहरणका लागि, तपाईं कहिल्यै आफ्नो इन्स्टाग्राम जैव मा हास्य सान्स केही शब्द सम्मिलित गर्न सक्षम, तपाईं प्रतिलिपि को प्रतीक साधारण ASCII प्रतीक हुनेछ र साइट मालिक द्वारा निर्धारित रूपमा केही साइटहरु मा प्रतिबिम्बित हुने हुनाले हुनेछ।
तर, केही शैली को हो केही फन्ट जस्तै जो नजर वा युनिकोड प्रतीक को सेट प्रयोग गर्दा (बोल्ड, ढल्किएको, रेखांकित वा उदाहरणका लागि उल्टो,), हामी «अनुकरण» प्रोफाइल मा एक सुन्दर फन्ट यस्तो पदहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ शीर्षक वा तपाईँको इन्स्टाग्राम पोस्ट मा।